Inqaba yeDrummond / inqaba - I-Airbnb
Inqaba yeDrummond / inqaba
Inqaba sinombuki zindwendwe onguEanan
ITower yaseVictoria Drummond yakhiwa njengeFolly Tower ngexesha lokuphumelela ngo-1858 nguWilliam Drummond Delap njengenxalenye yeMonasterboice House & Demesne.Le nqaba igqalwa njengenqaba yobudenge eyakhiwe njengesikhumbuzo sikanina ongasekhoyo. Kutshanje ibuyiselwe kwindawo encinci yokuhlala kwaye ngoku iyafumaneka ukuba irente kwiinyanga ezikhethiweyo zonyaka.Indawo ekhethekileyo kwaye eyonwabisayo yokuhlala enoluhlu oluninzi lwezinto zasekhaya kunye nezembali onazo.
I-Drummond Tower iquka i-4no. imigangatho ebandakanya inqanaba eliphezulu lophahla apho iindwendwe zinokonwabela iimbono ezibanzi zamaphandle ajikelezileyo.Umgangatho ongaphantsi unendawo yekhitshi enendawo zokupheka kunye neendawo zokuhlambela. Kumgangatho wokuqala kukho igumbi lokuhlala elitofotofo elinendawo eyaneleyo yokuphumla nokubukela iTV okanye ukufunda iincwadi zenza ingqokelela yeencwadi.Kukho 2 hayi. iibhedi ezino 1 no. ukuba yibhedi ekhululekileyo yesofa ephindwe kabini. Igumbi lokulala elikumgangatho wesibini lolokugqibela kumgangatho wangaphakathi oquka ibhedi enkulukazi ene-en-suite, ishawa kunye neendawo zokuhlambela.Enye yeenzuzo ezinkulu kukuvuka ekuseni kwaye ujonge phezu kwemithi kunye neendawo ezisemaphandleni.Umgangatho womgangatho ophezulu yi-castelated roof terrace. Kukho iimbono ze-360 degree zale ndawo kunye nendawo yokonwabela imozulu entle.Umgangatho ophahleni uyakhanyiswa ukuze umntu akwazi ukufikelela kwindawo ebusuku ukuze ajonge iinkwenkwezi
4.97 out of 5 stars from 849 reviews
4.97 · Izimvo eziyi-849
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi849
I-Drummond Tower izinze emaphandleni kwiBoyne Valley Drive-R168. Imizuzu emi-5 ukusuka kwiMonasterboice Round Tower kunye neMelifont Abbey.
INewgrange, iDowth, iOldbridge (iDabi laseBoyne) kunye neSlane / Collon Village ingaphakathi kwe-15mins drive.
I-Drogheda ikufuphi neevenkile, iindawo zokutyela kunye neeBar.Singacebisa i-Monasterboice Inn (i-5 mins drive) kunye nokukhethwa kokutya okumnandi kunye neziselo.
Khangela kwakhona "Hayi.Ezintathu" kwilali yaseCollon enokuba malunga neekhilomitha ezi-3 okanye undwendwele ilali ethandekayo yaseSlane kwaye ube nepinti kwiBoyles Pub.
Umbuki zindwendwe ngu- Eanan
Ukuba kukho iindwendwe ezifuna naluphi na uncedo malunga nolwazi lwendawo okanye ukuba unezicelo ezikhethekileyo ngesizathu nceda uqhagamshelane nathi okokuqala. Ukongeza, sivame ukushiya iindwendwe zodwa ukuba zizonwabele ukuhlala kwazo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Drogheda